Maalinta: Diseembar 21, 2019
Ku haboon, Verdi Injiilka ee tareenka dhoofinta First tegi doonaa ka Turkey si Shiinaha
Turkey, One Belt Road One nooleynta Project sameynta wadada ugu dhaqsiyaha badan tareenka u dhexeeya Shiinaha iyo Europe sii in ay ka doodaan beegsaday for waddada dhexe. Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun [More ...]
Macluumaadka Jidka cusub ee East Express Express
Wadada New East Express Route: Awoodda East Express, oo shaqeysa oo aad caan uga ah gobollada Ankara iyo Kars, ayaa la kordhayaa. Eastern Express, oo bixisa macluumaad ku saabsan waqtiyada bixitaanka iyo qiimaha Gaadiidka iyo [More ...]
Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Wadada Hal-ilaa-One ayaa la furay
Waxaa dhameystiray Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu ee ku taal magaalada Mesudiye Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Wadada hal-hal iyo buundo ayaa loo furay in lagu qabto xafladda furitaanka. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ordu wuxuu ka qeybgalay barnaamijka. Si toos ah ula xiriir Hilmi [More ...]
İlker Başbuğ: Thrace waxaa loo qeybiyay labo hadii Channel uu yahay Istanbul
Taliyaha Guud ee 26-aad Jeneraal Ilker Basbug, qiimeyntiisa ku saabsan mashruuca Channel Istanul, 'Channel wuxuu u qaybsan yahay laba haddii Istanbul Thrace' ayuu yiri. Taliyaha guud ee 26-aad Gen. İlker Başbuğ, Habertürk TV oo muran ka dhaliyay Channel [More ...]
Agenda of Economy waxaa looga wada hadlay OSTİM
Duqa magaalada Yenimahalle Fethi Yaşar ayaa ka soo qayb galay kulanka ay soo qaban qaabiyeen warshado-yaqaanno iyo dad ganacsato ah oo ka shaqeeya OSTİM Organisation Organised Organisation. Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay soo saareyaal ka socda qeybo badan sida difaaca, caafimaadka, qalabka dhismaha iyo dhismaha. [More ...]
Miyaa istaafka Bosphorus iyo Ankara Express istaagaan Xarunta Tareenka Pamukova?
Miyaa istaafka Bosphorus iyo Ankara Express istaagi doonaan Xarunta tareenka Pamukova ?; Bosphorus iyo Ankara Express kuma joogsan Saldhigga Pamukova ee Sakarya waxayna keentay falcelin. TCDD Qaybta 1aad ee Agaasimeyaasha Gobolka ee saldhigga Pamukova [More ...]
Gondola Injiil wuxuu u dirayaa Samsun degmada Canik!
Gondola Injiil wuxuu u dirayaa degmada Canik ee Samsun! Janik la kulmay dadka deggan xaafadda in Hacıismail ee Samsun Metropolitan degmada Duqa Iron, "mid ka mid ah wiishashka ski ugu quruxda Turkiga waxaan dhisi doonaa Janik," ayuu yiri. Mashruuca “Duqa xaafadaha” ee degmada Canik [More ...]
Ardayda Jaamacada Iğdır waxay abaabushay Safar Farsamo oo ay ku Kusoo wareejinayaan Agaasinka Saadka
Barnaamijka Aasaasiga ah ee Iskuullada Xirfadaha ee Jaamacadda Iğdır ee ardayda fasallada 2-aad ayaa abaabushay safar farsamo oo ay ku tagayaan Waddooyinka Tareenka ee Kars State (TCDD) - Agaasinka Agaasinka Saadka iyo Khadka Tareenka. Wadada tareenka, waax muhiim u ah qaybta saadka [More ...]
Wasiir Varank wuxuu sawirkiisa ku wadaagayaa Baabuur maxali ah; Wareysi lala yeeshay suxufiyiinta Malaysia, Raiisul Wasaaraha iyo hogaamiyaha AKP Recep Tayyip Erdoğan ayaa ku dhawaaqay inay soo bandhigi doonaan gaariga maxaliga ah 27ka Diseembar. [More ...]
Shirkadaha Turkiga ayaa Dalbanaya Montenegro Xaqa ay U Leedahay Inay Shaqeeyaan Gagida Diyaaradaha Tivat iyo Podgorica
Qandaraasyada Montenegro ee 'Tivat iyo Podgorica Madaarada Caalamiga ah 30-sano Xaquuqda Howlgalka' ayaa la soo aruuriyay. Cengiz Construction ka Turkey, tav Holding iyo Limak ka mid ah waxey ku jira. Gegada Diyaaradaha Tivat [More ...]
Shaqada Dhirta Dhirta ee Yaxya Kaptan Yonca ayaa Bilaabantay
Shaqada Dhirta Dhirta ee Yaxya Kaptan Yonca wuxuu Bilaabmay; Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo dejisay aagagga wadooyinka, buundooyinka iyo isgoysyada Kocaeli, ayaa sii wata howlaheeda qaabkan. park [More ...]
GaadiidkaPark Diyaar u ah Dhulgariirrada iyo Dabka
Sheekadii shaqo-joojinta ee ka dhacday Agaasinka Guud ee GaadiidkaPark, mid ka mid ah xiriiriyaasha Magaalada Caasimadda ee Kocaeli, ma uusan raadin runta. Dhulgariirkii 7.1-magnitude ee Istanbul Silivri ayaa ka bilaawday jimicsiga wuxuu bilaabay inuu dhawaaqo dhawaaq. 20 sekan kahor shaqaalaha dhulgariirka [More ...]
Tunnelka Eurasia ayaa badbaadiya 1,2 bilyan oo doollar sanadkiiba
Tunisyada Eurasia Tunnel, oo loo adeegsaday bishii Diseembar 20, 2016 si ay gacan uga geysato bartilmaameedka gaadiidka magaalada ee Istanbul, ayaa badbaadisay ku dhawaad ​​TL 1,2 bilyan sanadkan. Tunis Eurasia Tunnel laga bilaabo Diseembar 20, 2016 [More ...]
Gaadiidka TCDD Naafonimada Naafada ah iyo Natiijada Imtixaanka Shaqaaleysiinta Shaqaaleynta Imtixaanka Afka
Gawaarida TCDD Gawaarida Naafada ah iyo Natiijada Imtixaanka Shaqaaleysiinta Shaqaaleynta Imtixaanka Afka; Natiijooyinka Imtixaanka Afka ah (Naafada-Ex-Convict) oo ay sameysay TCDD Taşımacılık A.Ş 03.10.2019 ayaa lagu dhawaaqay. Halkan guji si aad u aragto natiijooyinka. Murashaxiinta guuleysta [More ...]